ကားတစ်စီးဝယ်တော့မည်ဆိုလျှင် မဖြစ်မနေ စစ်သင့်သည့် အချက်လေးများ - Latest Myanmar News
ကားတစ်စီးဝယ်တော့မည်ဆိုလျှင် မဖြစ်မနေ စစ်သင့်သည့် အချက်လေးများ
June 5, 2020 Latest Myanmar News ဗဟုသုတ 0
စာကတော့ နည်းနည်း ရှည်မယ် ဗဟုသုတ လိုချင်ရင်တော့ သည်းခံပြီး ဖတ်ကြည့်ပါ
“ကားဝယ်မည့်သူများ မဖြစ်မနေ သိထားသင့်သောကိစ္စများ”
၁/ အရိုးဆစ် ကောင်း မကောင်း ကြည့်မယ်
အရိုးဆစ်ကောင်း မကောင်းကို အရင်ဦးဆုံးရှေ့က ဘောနပ် (စက်ဖုံး)ကို ဖွင့်ပါ ရှော့ဘား အထိုင် နေရာ ပတ်လည် ချက်စီတန်းနေရာ ပတ်လည်ကို အသေချာကြည့်ပါ
တစ်ချို့ကား တွေမှာ ချက် စီတန်းက ထိုင်ခုံအောက်မှာ ရှိပါတယ် အောက်မှာ ပုံနှင့်တကွ ပြပေးထားပါတယ် အဲဒီနေရာတွေမှာ ပုံမှန် အနေထားမဟုတ်ပဲ တစ်ခုခု လွှဲမှားနေသလား
ဥပမာ/ ဆေးတွေ ကြမ်းနေလား ပတ်တီးအက်ကြောင်းဖြစ်နေလား ပိန်နေလား လိမ်နေလား ပုံမှန် အနေထား ဟုတ်လား မဟုတ်လား အသေချာကြည့်ပါ ပုံမှန် အနေထားမဟုတ်ရင် သိသာပါတယ်
ထိုနည်းတူ တခြားနေရာတွေလည်း ဒီအတိုင်းပဲ စစ်ပါ တံခါးလေးဘက်အတွင်း နောက်ဖုံး အတွင်း ရေတိုင်ကီတန်း အပေါ် အောက်ကို ကြည့်ပါမယ် အဆက်နေရာလေးတွေမှာ အော်ရယ်ဂျင်နယ် စပေါ့ အချိုက်သေးသေးလေးတွေပါ ရပါမယ် ဒါဆိုရင် အရိုးဆစ် ကြည့်တဲ့ ကိစ္စလုံလောက်ပါပြီ”
ယာဉ်မှန် မမှန် ကညနရုံးမှာ မစစ်ဘူး ဆိုရင်တော့ ရေဝိုက်ပါ ကာဘာ အဖုံးကို ဖြုတ်ကြည့်ဖို့ လိုပါမယ် ထိုင်ခုံအောက်ဆိုရင်လည်း ထိုင်ခုံဖြုတ်ပြီး ကြမ်းခင်း ခဏခွာကြည့်ဖို့ လိုပါမယ် ကညနရုံးမှာ ယာဉ်မှန်
မမှန် စစ်မယ် ဆိုရင်တော့ ဒါတွေ ဖြုတ်ကြည့်ခွာကြည့်ဖို့ မလိုပါ ရုံးက တာဝန်ရှိသူတွေ အဲဒီနေရာတွေကို စစ်ပါလိမ့်မည်”
၂/ဘော်ဒီ ကောင်း မကောင်းကြည့်မယ်
ဘော်ဒီကောင်း မကောင်း ဘယ်လို ကြည့်မလည်း ဆိုတော့ အရင်ဦးဆုံး ဆယ်ပေအကွာလောက်ကနေ ဘော်ဒီဂျော (အကြော) ပုံမှန် ဟုတ်မဟုတ် တစ်ချက် ရှိုးမယ်
ပြီးရင် ဘော်ဒီနေရာအနှံ့ လက်ညှိုးနဲ့ ဖြစ်စေ လက်ခလည်နဲ့ ဖြစ်စေ ဇယ်တောက်သလိုလေး လိုက်ခေါက်ကြည့်ပါ ပုံမှန်အသံက သံပြား အသံ အသံမာမာလေး ထွက်ရပါမယ်
ဒီလို မဟုတ်ပဲ သစ်သားပုံး တစ်ခုခုကို ခေါက်နေရသလို တစ်ဘုတ်ဘုတ်နဲ့ ဖြစ်နေရင်တော့ ထ်ိခိုက်ထားပြီး ပြန်ပြင်ထားတာပါ ဘော်ဒီကို စစ်ဆေးတာ ဒီလောက်ဆို လုံလောက်ပါပြီ”
၃/မှန်စပေါ့ မှန် အက်ကြောင်း ရှိမရှိ စစ်မယ်
ဒါစစ်တာကတော့ လွယ်ပါတယ်လူတိုင်း ကြည့်တက်ပါတယ် သတိထားရမှာက ရှေ့လေကာမှန်ဆိုရင် အနားသက်လေးတွေမှာ အမဲရောင် ကွတ်ထားတာလေးတွေ ရှိပါတယ်
အမဲ နေရာလေးတွေမှာ အက်ကြောင်းရှိနေရင် အမှတ်တမဲ့ ဆို မမြင်နိုင်ပါဘူး အသေချာကြည့်ပါ”ဒါဆို လုံလောက်ပါပြီ”
၄/ဘော်ဒီကြမ်းခင်း ဆွေး မဆွေး ကြည့်မယ်
ဒါလည်း လွယ်ပါတယ် အခင်းတခုရှာပါ ခေါင်းဝင်ပြီး ပက်လပ် လှန်ကြည့်ပါ အရမ်းနိပ်တဲ့ ကားဆိုရင် အလွယ်တကူ စင်ပေါ်တင်လို့ရတဲ့ နေရာဆိုရင် စင်ပေါ်တင်ကြည့်ပါ ဥပမာ ရေဆေးခုံလိုနေရာ ဝပ်ရှော့လိုနေရာ ဒါဆိုရင် လုံလောက်ပါပြီ။
၅/ အင်ဂျင် ကောင်း မကောင်းစစ်မယ်
မိတ်ဆွေအနေနဲ့ အရမ်းခက်ခဲမယ်လို့ တွေးထင်ထားမှာပါ
ဟုတ်ပါတယ် မသိရင်တော့ ခက်ခဲပါတယ် ကျွန်တော် ဆိုရင် အချိန်တွေ အမှားတွေ အများကြီးရင်း ပြီးမှ သိခဲ့ရတာပါ
မိတ်ဆွေအနေနဲ့ ကျွန်တော့်လို အများကြီး ရင်းစရာမလိုပါဘူး စာလေး နှစ်ကြောင်း သုံးကြောင်း ဖက်လိုက်တာနဲ့ သိပါပြီ အိုင်တင်ခံနေတယ် လို့ မထင်ပါနဲ့ စာပေရဲ့ ကျေးဇူး စာတကြောင်းရဲ့ ကျေးဇူးသိအောင် ပြောပြတာပါ။
အရင်ဦးဆုံး ကားကို စက်နှိုးထားပါမယ် အင်ဂျင်ဝိုင်တိုင်းတဲ့ ဂိတ်တံလေးကို ဆွဲဖွင့်လိုက်ပါ အောက်မှာ ပုံနဲ့လည်း ပြပေးပါမယ်
မီးခိုးမှုတ်လား မမှုတ်ဘူးလား ကြည့်ပါ သိပ်ပြီး မသင်္ကာဘူးထင်ရင် လီဘာနင်း ကြည့်ပါမီးခိုးမှုတ်နေရင် အင်ဂျင်ကျနေပါပြီ အင်ဂျင် မကောင်းပါ
အပေါ် ဖွင့် အောက် ဖွင့် လုပ်ရပါတော့မယ် အခန့်မသင့်ရင် အင်ဂျင် အလုံးလိုက်ချိန်းရပါမယ် တခြားအသံတွေကတော့နားထောင်လို့ လွယ်ပါတယ် ကွန်ပရာဆာ ဘောသံ
ရေလည်အုံ ဘောသံ တိုက်ဗစ် မည်သံ တခြားအသံတွေ ထွက် မထွက် နားထောင်ရင် ရပါပြီ ။ဒါဆိုရင် အင်ဂျင်ကောင်းမကောင်း စစ်ဆေးတာ လုံလောက်ပါပြီ”
၆/ ဒိုင်ခွက်က သတိပေး မီးများ ပုံမှန် ဟုတ် မဟုတ် စစ်ဆေးမယ်
ဒါကလည်း လွယ်ပါတယ် ယာဉ်မောင်းထိုင်ခံမှာ ထိုင်ပါ သော့မှာ အချက်သုံးချက်ပါမယ် ပထမအကြိမ် လှည့်တဲ့ အချက်က ကက်ဆက် နဲ့ ဆေးလိပ်မီးပေါက် ကို မီးပို့ပါတယ်
ဒုတိယ တစ်ကြိမ်က ဒိုင်ခွက်မှာ ရှိတဲ့ မီးတွေရယ် ကွန်မြူတာဘောက်နဲ့ တခြား မီးရောက်ရမဲ့ နေရာတွေကို အကုန်လုံး မီးပို့ပါတယ် တတိယအကြိမ်မှာ စက်နှိုးတယ်
ဒါကတော့ လူတိုင်းသိပါတယ် ဒုတိယကြိမ် ဒုတိယ အချက်မှာ ဒိုင်ခွက်မှာရှိတဲ့ မီးတွေ အကုန်လင်းရပါမယ် အင်ဂျင်ချက် မီး အဲယားဘက်မီး ၊ဘတ္ထရီ ပုံ၊အင်ဂျင်ဝိုင် ချက် မီး၊ABS ချက် မီးလင်းရမဲ့ မီးအကုန်လင်း ရပါမယ် စက်နှိုးပြီးသွားရင် အဲဒီမီးတွေ အကုန်ငြိမ်းရပါမယ်
မီးတစ်ခုခု လင်းနေရင် Error တခုခုရှိနေပါပြီ နောက်တစ်ခုရှိတာက ဟွန်ဒါ အုပ်စုမှာ အများဆုံး တွေ့ရမှာပါ ဘတ္ထရီနဲ့ အင်ဂျင်တွဲပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့ ကားတွေမှာ ဆိုရင် ဘတ္ထရီ ကောင်း မကောင်း နဲ့ ရှာဂျင်ဝင် မဝင် ကြည့်ရပါမယ်
အဲဒီကားတွေဆိုရင် ဟိုပ်ဗစ်ဆိုပြီး အမည်ပေးထားပါတယ် ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည် ရောက်နေ ကားတော်တော်များများကတော့ ဘတ္ထရီ သက်တမ်းကုန်နေကြပါပြီ ဟိုပ်ဗစ် မဟုတ်ရင် အဲဒါတွေ ခေါင်းထဲ ထည့်စရာမလိုပါ
ဒါဆိုရင် ဒိုင်ခွက်က သတိပေး မီးတွေ စစ်ဆေးမှု လုံလောက်ပါပြီ”
၇/ အောက်ပိုင်း ကောင်းမကောင်း ဂီယာချိန်းပုံ မှန် မမှန် မောင်းစစ်မယ်
ဒါကတော့ ကားမောင်းကြည့်ပြီး စစ်ဆေးရမဲ့ အပိုင်း ရောက်လာပြီ အောက်ပိုင်းကတော့ စစ်ရတာ လွယ်ပါတယ် ကီလို 30 ကျော် 40 လောက်ထိ မောင်းကြည့်ပါ
ဘရိတ်ဖမ်းကြည့်ပါ အသံနားထောင်ပါ လမ်းသိပ်မကောင်းတဲ့ အဖုအထစ်လေးတွေ ရှိတဲ့နေရာ မောင်းကြည့်ပါ တချို့ကား စီယာတိုင် ဂန်းက လမ်းအကောင်းမှာ လုံးဝအသံမထွက်ပါ
ဂီယာဘောက်အပိုင်းမှာ ကတော့ အော်တိုဂီယာ အင်ဂျင်ပါဝါကြီးတဲ့ကား ဆိုရင် ကီလို 80 လောက်ထိ မောင်းကြည့်ပါ ။ပါဝါ သေးရင်တော့ 50 ကျော် 60 လောက် မောင်းကြည့်ပါ
ဒါဆိုရင် ဂီယာအစုံအစိ ရောက်ပါပြီ ရိုးရိုးမန်နူရယ် ဂီယာဘောက်ဆိုရင် နံပါတ်တစ် ဂီယာကနေ 2345နောက်ဆုံးထိ ထည့်မောင်း စမ်းပါ
ဂီယာချိန်းတာပုံမှန်ဖြစ်သလားဂီယာ ဆောင့်သလား တွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ် ဖြစ်သလား ဂီယာ ငြီးသံကြား သလား နားထောင်ပါ ဒါဆိုရင် အောက်ပိုင်းနဲ့ ဂီယာ စစ်ဆေးမှု လုံလောက်ပါပြီ”
၈/ ယာဉ် မှန် မမှန် စစ်မယ်
ဒီအပိုင်းက အခုနောက်ပိုင်း ကညန ရုံးမှာပဲ သွားစစ်ကြတာများပါတယ် ကိုယ်တိုင် စစ်မယ် ဆိုရင်တော့ နံပါတ် (၁) အပိုင်းမှာ ပြောထားသလို ချက်စီတန်း
နေရာတစ်ဝိုက်ကို ဖြုတ်ပြီး ခွာပြီး စစ်ရပါမယ် ပြီးရင် အုံနာဘုတ် စာအုပ်နဲ့ ဝှီးတက် မှန် မမှန် စစ်ပါမယ် လိုင်စင်စစ်တဲ့ ဆောဝဲ ဒေါင်းလော့ဆွဲထားပါ
ဒီထက်ပိုပြီးသေချာချင်ရင် ခိုင်မာတဲ့ နေရာမှာ စာချုပ်ချုပ်ပါ အိမ် သို့မဟုတ် ရုံး စာချုပ် ချုပ်ငွေချေနေတဲ့ ပုံစံတွေ ဓာတ်ပုံရိုက်ယူထားပါ”ဒါဆိုရင် ယာဉ်မှန် မမှန် စစ်တဲ့ အပိုင်းမှာ လုံလောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်
ဒီလောက်ဆိုရင် ကားနဲ့ ရင်းနီးပြီးသား သူတွေ အတွက် ဇဝေဇဝါ ဖြစ်စရာ အကြောင်း မရှိတော့ပါ အရင်က တစ်မိုင်လောက်ကနေ မြင်ရတဲ့ အရာက အခု တစ်ပေလောက်ကနေ ကြည့်ရသလို ရှင်း သွားမှာပါ”
ပထမပို့စ်မှာ ပြောပြထားတဲ့ အကြမ်းဖြင်း (၈)ချက်ကိုတော့ အသေချာမှတ်ထားပါ ကားကြည့်တော့မယ်ဆိုရင် အဲဒီ အစဉ်တိုင်း စစ်ဆေးပါ အစဉ်တိုင်း မစစ်ရင် ဟိုဟာ ကျန် ဒါ ကျန်နဲ့ကျွန်တော့်လို ဖြစ်ပါမယ်
နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ ကားနဲ့ မရင်းနီးသေးတဲ့ သူတွေအတွက်ပါ ကားနံပါတ်တွေမှာ အက္ခရာတွေ ဂဏန်းတွေ ရှိပါမယ် နောက်မှာ ကABCD ကနေ အခုဆိုရင် R အထိ ထွက်နေပါပြီ ကားလောကမှာတော့ ရှေ့က 123456789ကို ထွေထွေထူးထူး ထည့်တွက်လေ့မရှိပါ
နောက်က Aတန်း Bတန်းCတန်းကနေ R တန်းထိ ဒီလိုပဲ တွက်ပါတယ် တက္ကစီတွေမှာဆိုရင်တော့ AA “BB ကနေ HH နောက်ဆုံးထွက်ထားပါတယ်
ရှေ့ဂဏန်းတွေကို မကြည့်ပဲ နောက်က ABCD ကနေ Rထိကို အစဉ်လိုက် အနှိပ်အမြင့် တွက်ပါတယ်။ တက္ကစီမှာလည်း AA BB ကနေ HH ထိ အစဉ်လိုက် အနှိပ် မြင့်တွက်ပါတယ် မော်ဒယ်တွေက ပြောပြစရာမလိုလောက်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆို ရှင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ကျွန်တော်သိသမျှတော့ ဒါ အကုန်ပဲ ကားပွဲစားနဲ့ ကားလောကထဲမှာလည်း ကုန်သလောက်ပါပဲ ဒီထက်သိတဲ့ ဆရာများရှိရင်လည်း ကျွန်တော့်ကို ပြန်လည် မျှဝေနိုင်ပါတယ်
တချို့ သော သူတွေ ထင်နိုင်ပါတယ် ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ် သူများ တွေကို ပြောပြတော့ ကိုယ့်ပါးစပ်ပေါက် ကိုယ် ပိတ်သလိုဖြစ်နေပြီ ထူတယ် အ”တယ်လို့ ထင်နိုင်ပါတယ်။အခု ဒီစာဖက်နေသော မိတ်ဆွေရော ကျွန်တော့်ကို ဘယ်လိုထင်ပါသလည်း
ကဲ…. ကားလောက ကျွန်တော် သိသမျှ အိပ်သွန်ဖာမှောက် အကုန် ပြောပြလိုက်ပါပြီ
ဘာပဲလုပ်လုပ် စေတနာ အပြည့်ထားပါတယ် ကိုယ်သိသလို သူများလည်း သိပါစေ ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် မိတ်ဆွေ သိသလို သူတစ်ပါးလည်း သိပါစေ ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ တစ်ဆင့် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါ”
စာကတော့ နညျးနညျး ရှညျမယျ ဗဟုသုတ လိုခငျြရငျတော့ သညျးခံပွီး ဖတျကွညျ့ပါ
“ကားဝယျမညျ့သူမြား မဖွဈမနေ သိထားသငျ့သောကိစ်စမြား”
၁/ အရိုးဆဈ ကောငျး မကောငျး ကွညျ့မယျ
အရိုးဆဈကောငျး မကောငျးကို အရငျဦးဆုံးရှကေ့ ဘောနပျ (စကျဖုံး)ကို ဖှငျ့ပါ ရှော့ဘား အထိုငျ နရော ပတျလညျ ခကျြစီတနျးနရော ပတျလညျကို အသခြောကွညျ့ပါ
တဈခြို့ကား တှမှော ခကျြ စီတနျးက ထိုငျခုံအောကျမှာ ရှိပါတယျ အောကျမှာ ပုံနှငျ့တကှ ပွပေးထားပါတယျ အဲဒီနရောတှမှော ပုံမှနျ အနထေားမဟုတျပဲ တဈခုခု လှဲမှားနသေလား
ဥပမာ/ ဆေးတှေ ကွမျးနလေား ပတျတီးအကျကွောငျးဖွဈနလေား ပိနျနလေား လိမျနလေား ပုံမှနျ အနထေား ဟုတျလား မဟုတျလား အသခြောကွညျ့ပါ ပုံမှနျ အနထေားမဟုတျရငျ သိသာပါတယျ
ထိုနညျးတူ တခွားနရောတှလေညျး ဒီအတိုငျးပဲ စဈပါ တံခါးလေးဘကျအတှငျး နောကျဖုံး အတှငျး ရတေိုငျကီတနျး အပျေါ အောကျကို ကွညျ့ပါမယျ အဆကျနရောလေးတှမှော အျောရယျဂငျြနယျ စပေါ့ အခြိုကျသေးသေးလေးတှပေါ ရပါမယျ ဒါဆိုရငျ အရိုးဆဈ ကွညျ့တဲ့ ကိစ်စလုံလောကျပါပွီ”
ယာဉျမှနျ မမှနျ ကညနရုံးမှာ မစဈဘူး ဆိုရငျတော့ ရဝေိုကျပါ ကာဘာ အဖုံးကို ဖွုတျကွညျ့ဖို့ လိုပါမယျ ထိုငျခုံအောကျဆိုရငျလညျး ထိုငျခုံဖွုတျပွီး ကွမျးခငျး ခဏခှာကွညျ့ဖို့ လိုပါမယျ ကညနရုံးမှာ ယာဉျမှနျ
မမှနျ စဈမယျ ဆိုရငျတော့ ဒါတှေ ဖွုတျကွညျ့ခှာကွညျ့ဖို့ မလိုပါ ရုံးက တာဝနျရှိသူတှေ အဲဒီနရောတှကေို စဈပါလိမျ့မညျ”
၂/ဘျောဒီ ကောငျး မကောငျးကွညျ့မယျ
ဘျောဒီကောငျး မကောငျး ဘယျလို ကွညျ့မလညျး ဆိုတော့ အရငျဦးဆုံး ဆယျပအေကှာလောကျကနေ ဘျောဒီဂြော (အကွော) ပုံမှနျ ဟုတျမဟုတျ တဈခကျြ ရှိုးမယျ
ပွီးရငျ ဘျောဒီနရောအနှံ့ လကျညှိုးနဲ့ ဖွဈစေ လကျခလညျနဲ့ ဖွဈစေ ဇယျတောကျသလိုလေး လိုကျခေါကျကွညျ့ပါ ပုံမှနျအသံက သံပွား အသံ အသံမာမာလေး ထှကျရပါမယျ
ဒီလို မဟုတျပဲ သဈသားပုံး တဈခုခုကို ခေါကျနရေသလို တဈဘုတျဘုတျနဲ့ ဖွဈနရေငျတော့ ထျိခိုကျထားပွီး ပွနျပွငျထားတာပါ ဘျောဒီကို စဈဆေးတာ ဒီလောကျဆို လုံလောကျပါပွီ”
၃/မှနျစပေါ့ မှနျ အကျကွောငျး ရှိမရှိ စဈမယျ
ဒါစဈတာကတော့ လှယျပါတယျလူတိုငျး ကွညျ့တကျပါတယျ သတိထားရမှာက ရှလေ့ကောမှနျဆိုရငျ အနားသကျလေးတှမှော အမဲရောငျ ကှတျထားတာလေးတှေ ရှိပါတယျ
အမဲ နရောလေးတှမှော အကျကွောငျးရှိနရေငျ အမှတျတမဲ့ ဆို မမွငျနိုငျပါဘူး အသခြောကွညျ့ပါ”ဒါဆို လုံလောကျပါပွီ”
၄/ဘျောဒီကွမျးခငျး ဆှေး မဆှေး ကွညျ့မယျ
ဒါလညျး လှယျပါတယျ အခငျးတခုရှာပါ ခေါငျးဝငျပွီး ပကျလပျ လှနျကွညျ့ပါ အရမျးနိပျတဲ့ ကားဆိုရငျ အလှယျတကူ စငျပျေါတငျလို့ရတဲ့ နရောဆိုရငျ စငျပျေါတငျကွညျ့ပါ ဥပမာ ရဆေေးခုံလိုနရော ဝပျရှော့လိုနရော ဒါဆိုရငျ လုံလောကျပါပွီ။
၅/ အငျဂငျြ ကောငျး မကောငျးစဈမယျ
မိတျဆှအေနနေဲ့ အရမျးခကျခဲမယျလို့ တှေးထငျထားမှာပါ
ဟုတျပါတယျ မသိရငျတော့ ခကျခဲပါတယျ ကြှနျတျော ဆိုရငျ အခြိနျတှေ အမှားတှေ အမြားကွီးရငျး ပွီးမှ သိခဲ့ရတာပါ
မိတျဆှအေနနေဲ့ ကြှနျတေျာ့လို အမြားကွီး ရငျးစရာမလိုပါဘူး စာလေး နှဈကွောငျး သုံးကွောငျး ဖကျလိုကျတာနဲ့ သိပါပွီ အိုငျတငျခံနတေယျ လို့ မထငျပါနဲ့ စာပရေဲ့ ကြေးဇူး စာတကွောငျးရဲ့ ကြေးဇူးသိအောငျ ပွောပွတာပါ။
အရငျဦးဆုံး ကားကို စကျနှိုးထားပါမယျ အငျဂငျြဝိုငျတိုငျးတဲ့ ဂိတျတံလေးကို ဆှဲဖှငျ့လိုကျပါ အောကျမှာ ပုံနဲ့လညျး ပွပေးပါမယျ
မီးခိုးမှုတျလား မမှုတျဘူးလား ကွညျ့ပါ သိပျပွီး မသင်ျကာဘူးထငျရငျ လီဘာနငျး ကွညျ့ပါမီးခိုးမှုတျနရေငျ အငျဂငျြကနြပေါပွီ အငျဂငျြ မကောငျးပါ
အပျေါ ဖှငျ့ အောကျ ဖှငျ့ လုပျရပါတော့မယျ အခနျ့မသငျ့ရငျ အငျဂငျြ အလုံးလိုကျခြိနျးရပါမယျ တခွားအသံတှကေတော့နားထောငျလို့ လှယျပါတယျ ကှနျပရာဆာ ဘောသံ
ရလေညျအုံ ဘောသံ တိုကျဗဈ မညျသံ တခွားအသံတှေ ထှကျ မထှကျ နားထောငျရငျ ရပါပွီ ။ဒါဆိုရငျ အငျဂငျြကောငျးမကောငျး စဈဆေးတာ လုံလောကျပါပွီ”
၆/ ဒိုငျခှကျက သတိပေး မီးမြား ပုံမှနျ ဟုတျ မဟုတျ စဈဆေးမယျ
ဒါကလညျး လှယျပါတယျ ယာဉျမောငျးထိုငျခံမှာ ထိုငျပါ သော့မှာ အခကျြသုံးခကျြပါမယျ ပထမအကွိမျ လှညျ့တဲ့ အခကျြက ကကျဆကျ နဲ့ ဆေးလိပျမီးပေါကျ ကို မီးပို့ပါတယျ
ဒုတိယ တဈကွိမျက ဒိုငျခှကျမှာ ရှိတဲ့ မီးတှရေယျ ကှနျမွူတာဘောကျနဲ့ တခွား မီးရောကျရမဲ့ နရောတှကေို အကုနျလုံး မီးပို့ပါတယျ တတိယအကွိမျမှာ စကျနှိုးတယျ
ဒါကတော့ လူတိုငျးသိပါတယျ ဒုတိယကွိမျ ဒုတိယ အခကျြမှာ ဒိုငျခှကျမှာရှိတဲ့ မီးတှေ အကုနျလငျးရပါမယျ အငျဂငျြခကျြ မီး အဲယားဘကျမီး ၊ဘတ်ထရီ ပုံ၊အငျဂငျြဝိုငျ ခကျြ မီး၊ABS ခကျြ မီးလငျးရမဲ့ မီးအကုနျလငျး ရပါမယျ စကျနှိုးပွီးသှားရငျ အဲဒီမီးတှေ အကုနျငွိမျးရပါမယျ
မီးတဈခုခု လငျးနရေငျ Error တခုခုရှိနပေါပွီ နောကျတဈခုရှိတာက ဟှနျဒါ အုပျစုမှာ အမြားဆုံး တှရေ့မှာပါ ဘတ်ထရီနဲ့ အငျဂငျြတှဲပွီး အလုပျလုပျတဲ့ ကားတှမှော ဆိုရငျ ဘတ်ထရီ ကောငျး မကောငျး နဲ့ ရှာဂငျြဝငျ မဝငျ ကွညျ့ရပါမယျ
အဲဒီကားတှဆေိုရငျ ဟိုပျဗဈဆိုပွီး အမညျပေးထားပါတယျ ဒါပမေဲ့ မွနျမာပွညျ ရောကျနေ ကားတျောတျောမြားမြားကတော့ ဘတ်ထရီ သကျတမျးကုနျနကွေပါပွီ ဟိုပျဗဈ မဟုတျရငျ အဲဒါတှေ ခေါငျးထဲ ထညျ့စရာမလိုပါ
ဒါဆိုရငျ ဒိုငျခှကျက သတိပေး မီးတှေ စဈဆေးမှု လုံလောကျပါပွီ”
၇/ အောကျပိုငျး ကောငျးမကောငျး ဂီယာခြိနျးပုံ မှနျ မမှနျ မောငျးစဈမယျ
ဒါကတော့ ကားမောငျးကွညျ့ပွီး စဈဆေးရမဲ့ အပိုငျး ရောကျလာပွီ အောကျပိုငျးကတော့ စဈရတာ လှယျပါတယျ ကီလို 30 ကြျော 40 လောကျထိ မောငျးကွညျ့ပါ
ဘရိတျဖမျးကွညျ့ပါ အသံနားထောငျပါ လမျးသိပျမကောငျးတဲ့ အဖုအထဈလေးတှေ ရှိတဲ့နရော မောငျးကွညျ့ပါ တခြို့ကား စီယာတိုငျ ဂနျးက လမျးအကောငျးမှာ လုံးဝအသံမထှကျပါ
ဂီယာဘောကျအပိုငျးမှာ ကတော့ အျောတိုဂီယာ အငျဂငျြပါဝါကွီးတဲ့ကား ဆိုရငျ ကီလို 80 လောကျထိ မောငျးကွညျ့ပါ ။ပါဝါ သေးရငျတော့ 50 ကြျော 60 လောကျ မောငျးကွညျ့ပါ
ဒါဆိုရငျ ဂီယာအစုံအစိ ရောကျပါပွီ ရိုးရိုးမနျနူရယျ ဂီယာဘောကျဆိုရငျ နံပါတျတဈ ဂီယာကနေ 2345နောကျဆုံးထိ ထညျ့မောငျး စမျးပါ
ဂီယာခြိနျးတာပုံမှနျဖွဈသလားဂီယာ ဆောငျ့သလား တှနျ့ဆုတျတှနျ့ဆုတျ ဖွဈသလား ဂီယာ ငွီးသံကွား သလား နားထောငျပါ ဒါဆိုရငျ အောကျပိုငျးနဲ့ ဂီယာ စဈဆေးမှု လုံလောကျပါပွီ”
၈/ ယာဉျ မှနျ မမှနျ စဈမယျ
ဒီအပိုငျးက အခုနောကျပိုငျး ကညန ရုံးမှာပဲ သှားစဈကွတာမြားပါတယျ ကိုယျတိုငျ စဈမယျ ဆိုရငျတော့ နံပါတျ (၁) အပိုငျးမှာ ပွောထားသလို ခကျြစီတနျး
နရောတဈဝိုကျကို ဖွုတျပွီး ခှာပွီး စဈရပါမယျ ပွီးရငျ အုံနာဘုတျ စာအုပျနဲ့ ဝှီးတကျ မှနျ မမှနျ စဈပါမယျ လိုငျစငျစဈတဲ့ ဆောဝဲ ဒေါငျးလော့ဆှဲထားပါ
ဒီထကျပိုပွီးသခြောခငျြရငျ ခိုငျမာတဲ့ နရောမှာ စာခြုပျခြုပျပါ အိမျ သို့မဟုတျ ရုံး စာခြုပျ ခြုပျငှခေနြေတေဲ့ ပုံစံတှေ ဓာတျပုံရိုကျယူထားပါ”ဒါဆိုရငျ ယာဉျမှနျ မမှနျ စဈတဲ့ အပိုငျးမှာ လုံလောကျပွီလို့ ထငျပါတယျ
ဒီလောကျဆိုရငျ ကားနဲ့ ရငျးနီးပွီးသား သူတှေ အတှကျ ဇဝဇေဝါ ဖွဈစရာ အကွောငျး မရှိတော့ပါ အရငျက တဈမိုငျလောကျကနေ မွငျရတဲ့ အရာက အခု တဈပလေောကျကနေ ကွညျ့ရသလို ရှငျး သှားမှာပါ”
ပထမပို့ဈမှာ ပွောပွထားတဲ့ အကွမျးဖွငျး (၈)ခကျြကိုတော့ အသခြောမှတျထားပါ ကားကွညျ့တော့မယျဆိုရငျ အဲဒီ အစဉျတိုငျး စဈဆေးပါ အစဉျတိုငျး မစဈရငျ ဟိုဟာ ကနျြ ဒါ ကနျြနဲ့ကြှနျတေျာ့လို ဖွဈပါမယျ
နောကျတဈပိုငျးကတော့ ကားနဲ့ မရငျးနီးသေးတဲ့ သူတှအေတှကျပါ ကားနံပါတျတှမှော အက်ခရာတှေ ဂဏနျးတှေ ရှိပါမယျ နောကျမှာ ကABCD ကနေ အခုဆိုရငျ R အထိ ထှကျနပေါပွီ ကားလောကမှာတော့ ရှကေ့ 123456789ကို ထှထှေထေူးထူး ထညျ့တှကျလမေ့ရှိပါ
နောကျက Aတနျး BတနျးCတနျးကနေ R တနျးထိ ဒီလိုပဲ တှကျပါတယျ တက်ကစီတှမှောဆိုရငျတော့ AA “BB ကနေ HH နောကျဆုံးထှကျထားပါတယျ
ရှဂေ့ဏနျးတှကေို မကွညျ့ပဲ နောကျက ABCD ကနေ Rထိကို အစဉျလိုကျ အနှိပျအမွငျ့ တှကျပါတယျ။ တက်ကစီမှာလညျး AA BB ကနေ HH ထိ အစဉျလိုကျ အနှိပျ မွငျ့တှကျပါတယျ မျောဒယျတှကေ ပွောပွစရာမလိုလောကျဘူးလို့ ထငျပါတယျ။
ဒီလောကျဆို ရှငျးမယျလို့ ထငျပါတယျ ကြှနျတျောသိသမြှတော့ ဒါ အကုနျပဲ ကားပှဲစားနဲ့ ကားလောကထဲမှာလညျး ကုနျသလောကျပါပဲ ဒီထကျသိတဲ့ ဆရာမြားရှိရငျလညျး ကြှနျတေျာ့ကို ပွနျလညျ မြှဝနေိုငျပါတယျ
တခြို့ သော သူတှေ ထငျနိုငျပါတယျ ကိုယျလုပျတဲ့ အလုပျ သူမြား တှကေို ပွောပွတော့ ကိုယျ့ပါးစပျပေါကျ ကိုယျ ပိတျသလိုဖွဈနပွေီ ထူတယျ အ”တယျလို့ ထငျနိုငျပါတယျ။အခု ဒီစာဖကျနသေော မိတျဆှရေော ကြှနျတေျာ့ကို ဘယျလိုထငျပါသလညျး
ကဲ…. ကားလောက ကြှနျတျော သိသမြှ အိပျသှနျဖာမှောကျ အကုနျ ပွောပွလိုကျပါပွီ
ဘာပဲလုပျလုပျ စတေနာ အပွညျ့ထားပါတယျ ကိုယျသိသလို သူမြားလညျး သိပါစေ ဆိုတဲ့ စိတျနဲ့ ပွောပွခွငျးဖွဈပါတယျ မိတျဆှေ သိသလို သူတဈပါးလညျး သိပါစေ ဆိုတဲ့ စိတျနဲ့ တဈဆငျ့ ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါ”